Arabia Saodita : Ny Fiantraikan’ny Fahafatesan’i Nayef · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2012 2:11 GMT
Mahmoud Salem, Ejiptiana mpitoraka bilaogy, dia manamarika hoe :
@Sandmonkey: Manana fiantraikany maro aty amin'ny faritra ny fahafatesan'ny Printsy Nayef fa tsy toy ny fifidianana ataontsika akory. Goavana ny kilalao mitranga ataon'ny mpitondra saodiana amin'izao.
miampy ny hoe :
@Sandmonkey: Oooay, hiatrika ny olana amin'ny tetezamitany ry zareo saodiana ankehitriny, na dia tsy azoko antoka loatra aza hoe halahelo ny olona mieritreritra ny hoe tsy hifehy azy ireo intsony i nayef.
Ilay Maoritaniana, Naser Weddady, manamarika hoe :
@weddady: Ny printsy mpandova, Nayef, no endrika hita mason'ny fifanoheran-kevitra tandrefana: henjana amin'ny mpampihorohoro, izay natsangany, novatsiany & nolalainy, fa mampiteny ny moana raha resaka zon'olombelona #Saudi
Ary ny zokiolona amin'ny Fikarohana ao amin'ny Fandaharanasa Chatham House, Afovoany Atsinanana sy any Afrika Avaratra , Jane Kinninmont manamarika hoe :
@janekinninmont: Noraisina ho toy ny hery manetsika ny politika Saodiana tao Bahrain sy Yemen ny Printsy Nayef (raha jerena akaiky dia tahaka ny hoe raharaha tafiditra ampahany ao anatin'ny sahanin'ny ministeran'ny atitany mihitsy izy ireny)
@janekinninmont: Aza miandrandra fiovàna tampoka eo amin'ny politika Saodiana izany ; Fitandremana be io, faritan'ny marimaritra iraisana ataon'ny fianakaviana & mbola be ny teboka henjana tsy maintsy omena valiny.
Ny mpitantara vaovaon'ny UAE, Sultan Al Qassemi, mampahatsiahy antsika :
@SultanAlQassemi: Nayef no faharoa amin'ny printsy mpandova fanjakana maty am-perinasa taorian'ny Printsy Sultan izay maty tamin'ny Oktobra 2011
Ary Amjad Saleem mivazivazy hoe :
@corporatesufi: sahala amin'ny hoe misy risika vitsivitsy izany ny maha-printsy mpandova fanjakana ao Arabia Saodita. Mety hisaintsaina in-droa ihany izy taorian'ity fahafatesana faharoa ity?
Mandritra izany fotoana izany dia mibitsika i Raza Aslan :
@rezaaslan: Sahala amin'ny hoe nanapa-kevitra Andriamanitra ny hiaro an'i Arabia Saodita #SaudiArabia amin'ny mety hisian'izany hoe Mpanjaka Nayef izany. Nodimandry omaly ny Printsy Henjana Mpandova ny Fanjakana.